Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game 1.0.12 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.12 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အွန်လိုင်းအဖွဲ့သည်-based အရေးယူထိတ်လန့်။ အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်အခြားသူများနှင့် Play ။ သူကားအဘယ်သူဖမ်းမိခြင်းနှင့်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏ဒေါသအမဲသတ်သမားတို့ကအဘယ်သူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်အသက်ရှင်လျှက်နေဖို့ပါလိမ့်မယ်ရကြလိမ့်မည်နည်း ဒါဟာအားလုံးသငျသညျအထိပါပဲ။
7 ကွဲပြားခြားနားသောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ မိမိတို့ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စွမ်းရည်၏ set တပ်🏃Join:
အင်ဂျင်ကိုပိုပြီးမြန်မြန်ခိုလှုံခွင့်န်းကျင်မီးစက်နှင့်လက်မှုပညာပစ္စည်းများ fix နိုင်ပါတယ်
သူခိုးအမြင့်ဆုံးကိုယ်ပျောက်နှင့် Dexter ရှိပါတယ်
သိပ္ပံပညာရှင်များစစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အခြားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူပညာသူ၏ aura ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်
ကျန်ကြွင်းသော '' ရည်မှန်းချက်, တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်စိတ်စိုးစံရှိရာကျောချမ်းဖွယ်အခြေစိုက်စခန်းမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပစ္စည်းများ, ဖုံးကွယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကူညီအသုံးပြုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်။ သေစေနိုင်သောထောင်ချောက်များနှင့်လျှို့ဝှက်ပုန်းခိုသောအရပ်တို့ကိုအပြည့်အဝတစ်ပူးတွဲအာကာသအတွင်း Play ။ အချိန်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ '' ဘက်မှာဘယ်တော့မှဖြစ်ပါသည်, ထွက်ပေါက်သော့ဖွင့်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အဆိုပါမီးစက်ပြုပြင်။
သင်တစ်ဦးအမိုးအကာတည်ဆောက်မယ့်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်, သင်ရှင်သန်ည-ပင်ခုနစ်ခုည-သို့မဟုတ်ငါးခုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ဦးကိုပုဆိန်နှင့်အတူသူကပြောတယ်အရူးနိုးထဖြစ်တယ်, ဒါ creepy အွန်လိုင်းဝှက်-and ရှာအံ့သောငှါဂိမ်းရှာအံ့သောငှါစတင်အကြောင်းကိုပါ! အသကျရှငျနေတဲ့ကြောက်စရာသေခြင်းတရားရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ! တစ်ဦးသရဲခြောက်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားအတွက်ရှင်သန်မှုများအတွက်တစ်ဦးကအသင်း-based စစ်က၎င်း၏သူရဲကောင်းများဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်!
ကြောက်စရာ mantraps နှင့်အများဆုံးအံ့သြဖွယ် Survival အတွက်နဲ့တူလျှို့ဝှက်ချက်ပုန်းခိုသောအရပ်တို့ကိုအပြည့်အဝတစ်ဦးစွန့်ပစ်ခိုလှုံခွင့် Explore ။ ထိန်းသိမ်းရေး၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောရာအရပ်မှအာဏာနှင့်ထွက်ပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့ဧရိယာ၌ရှိသမျှသောမီးစက်ပြုပြင်။ သင့်ရဲ့အော်သံဟာအမဲသတ်သမားကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ် - သငျကြောက်စိတ်နှင့်အတူဆူညံအော်ဟစ်ကြပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်မှောင်မိုက်မိကျောင်းမကြောက်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်အသက်ရှင်လျက်နေထိုင်ကြပါဘူး။
🔪Orဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အမြဲအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုအကြောင်းမရှိဖြစ်ခြင်း၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်သောကြာနေ့လူသတ်သမားကဲ့သို့အမှောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်း, လာအောင်နှိုးဆွင်? 13 သင်အကြိုက်ဆုံးအရေအတွက်ကဖြစ်သနည်း spooky ဂိမ်းတွေနဲ့ Jumpscare ဂိမ်းများကိုသင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်သနည်း ထိုအခါလွှအတူအသက်ကိုသတ်တတ်သောသူတို့သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာစိတ်၏ဘေးထွက်ယူပါ။
သငျသညျ4ကွဲပြားခြားနားသော Psycho ကျွမ်းကျင်မှုတစ်မူထူးခြားတဲ့အစုများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမဲလိုက်စတိုင်နှင့်အတူအသီးအသီး <= "# ff0000" font ကိုအရောင်> အဖြစ်ကစားနိုင်ပါတယ်:
တစ္ဆေစစ်မှန်သော poltergeist တူသောရိုးကိုဖြတ်သန်းနှင့်၎င်း၏သားကောင်များကိုခြိမ်းချောက်နိုင်ပါတယ်
လုပ်နိုင်မယ့်အသက်ကိုသတ်တတ်သောသူတို့သည်ဝံပုလွေသို့လှည့်ကြောင်း BEAST ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဝံပုလွေနဂါး
အဆိုပါစိတ်ပညာရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအရမ်းရိုးရှင်း - သည်လူဆိတ်ညံလျက်အမိုးအကာရှာဖွေအမှောင်ထဲမှာ labyrinth အတွက်ပုန်းအောင်းတိုင်းသားကောင်တုန်လှုပ်စေသောနှင့်လူသတ်မှုကျူးလွန်။ လေးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူဆန့်ကျင်သောမြေတွင်းတဦးတည်းစိတ်ပညာကိုက်ညီပေမယ့်လူသတ်သမားအားနီးပါးဘယျသူမှမအောငျပါပဲ။ သင်ရုံဒဏ္ဍာရီအရူးဂျေဆန်နဲ့တူအရူး, psychotic အမဲသတ်သမားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့! ရုံဂန္အရူးထိတ်လန့်တုတ်ဓားလိုပဲ Survival ၏လူဆိတ်ညံလျက်သေတ္တာထဲမှာတစ်ခုကမ္ဘာပျက်စီစဉ်! မကောင်းသောအသငျသညျအတွင်းနိုးထစို့နှင့်ဝေဒနာကိုခံရရန်သင့်ဒုက္ခသည်များကိုအတင်း!
- အရူး mode ကိုသင်လွတ်လပ်စွာသင့်ရဲ့သားကောင်အမဲများအတွက်မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ခွင့်ပြု
- Survivor mode ကိုကစားသမားပူးပေါင်းသွေးထွက်သံယိုလူသတ်သမားကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ပြု
- ထူးခြားသော Craft သည့်စနစ် - အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် smithies မှာပစ္စည်းများဖန်တီး upgrade
- Post-ကမ္ဘာပျက်နှင့် creepy ဂိမ်း၏လေထုနှင့်အတူ High-အသေးစိတ်နေရာများ
- မကြာမီလာမည်: မျိုးနွယ်စုများ, Quest များနှင့်ဦးဆောင်
💀 Horrorfield - ပင်ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်၏စစ်မှန်သောပရိတ်သတ်တွေတို့တွင်ကြက်သီးနိုးလိမ့်မည် multiplayer သောဝဒေနာထိတ်လန့်ဂိမ်း။ ဒါကပဲသင်၏အသက်တာ၏အရှိဆုံးကြောက်စရာထိတ်လန့်စွန့်စားမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ,
တဦးတည်းစိတ်ပညာနှိုင်းယှဉ်လေးယောက်သားကောင်များ။ လူသတ်သမားအဖြစ်ကစားနေစဉ်အပေါငျးတို့သအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ Capture သို့မဟုတ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများအတွက်သေတ္တာကိုရှာခြင်းငှါနှင့်အရူးအရူးလွတ်မြောက်ရန်။ သင့်ရဲ့အခြမ်းကိုရွေးပါ။ တစ်ဦးကသွေးထွက်သံယိုအွန်လိုင်းဝှက်နဲ့ရှာခြင်းငှါဂိမ်းကစတင်ခဲ့သည်! ကိုယ့်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှင်သန်နှင့် neverending အိပ်မက်ဆိုး outlast ကြိုးစားပါ။
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game အား အခ်က္ျပပါ
msi8 စတိုး 99.2k 30.5M
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Skytec Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.skytecgames.ru/privacy.html
Release date: 2019-08-30 05:38:48
လက်မှတ် SHA1: 4F:D5:47:15:16:1F:53:FA:55:88:77:F1:AC:4F:AA:24:79:1E:82:C8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Nikita Malyshkin
အဖွဲ့အစည်း (O): Skytec
နိုင်ငံ (C): 7
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Novosibirsk
Horrorfield - Multiplayer Survival Horror Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ